Komishanka doorashada iyo walaac cusub oo la soo darsey bulshada: | Cadceed newssite
Komishanka doorashada iyo walaac cusub oo la soo darsey bulshada:
Waxa illaa hadda baraha bulshada lagu soo bandhigey in ka badan 11 (kow iyo toban) jeer oo lagaga deyrinaayo Komishanka, loogana digaayo bulshoweynta Somaliland sida qaawan ee isugu diyaariyeen in lagu maroorsado xukunka iyo xaqaba. Waxay ay meelahaas ku soo bandhigeen komishanku in kooxo la shaqeysa laga keeno doono dibadda, in ay soo gaadheen qarkood wadanka, in ay kormeer badan sameyn doonaan. Waxaase la ogaadey in hadrad iyo riwaayad loo dhigaayo ummadda Somaliland.
Wax kaliya ee illa hadda la ogyahay in dalka Sweden uu digniin u soo direy madaxda dalka oo uu uga digaaayo in khalakhal la galiyo dalkan, waxa kale oo Sweden ay xukuumadda uga digeysaa janjeedhka gudoonka golaha guurtida. Laban gole ama hey’adood wax la isku raaacey dibad iyo gudahaba bulshada ku nool ama hey’adaha caalamiga in ay si cad oo aan badheedh ah ugu talax-tagayaan ku tumashada sharciga ama xaq soorka.
Digniinta illaa hadda inaga soo gaadhaya hey’adaha caalamiga wax yar baa bulshada soo gaadha, xukuumaduna lama qeybsato bulshada ay xakunto. Waxaan si dadban u ogaaney in illaa hadda shan dhambaal oo digniin siin ah la soo gaadhsiiyey madaxtooyada lagana soo direy: The United Nations, Sweden, The EU, UK, and Germany. Waxa kale oo af ahaan digniintaas mid la mid ah soo gaadhsiiyey madaxtooyada, dalka Ethiopia iyo Djibouti.
Markaan darisney xaalada guud, markaan aragney walaaca iyo dareenka dunidu ka qabto labadan aqal waa gudoonka guurtida iyo komishanka, markaan jeexjeexneey qorshaha ay wataan oo sdan lagu sifeeyey:
Tusaale: haddii laga guuleysto Wadani, waxa la qorsheeyey in khalkhal, iyo qas lagu kiciyo meelo badan oo ah mida loo wada yaqaan “Waar ku qabso oo ka maroorso”. Waxa isla markaas si daran dooriya ah u dhacayaa hubkii guurtida oo ah Habar iyo Duco kala doo Mr Cirrow. Guurtidu waxay wadankan Cirrow Awow iyo Adeer u soo horseeday nabada manta aan ku caweyneyno ee maan dabbadaa na qaawan oo aan circa u taageynaa yeh ee ducadda qaado halkaana ka bax Adeer!!
Waar dabbadaa na qaawan baa bulshooy loogu soo qoyestey hogaankii wadankan. Guddida doorashadu waxay diyaar la tahay, doorashadii wax is daba marin ahi ma ay dhicin, tiraduna wey iska caddahey oo xisbil-xaakimka yaa kubadda wata!
Ka sokow arrimaha kor ku xusan waxa la inaga doonayaa in aan culeyska saarno arrimahan soo socda:
1. Mudaharaadkii nabadeysnaa ee lagu hortagayey madaxtooyadda, Komishanka iyo Guurtida oo si dhaqso ah loo diyaariyo
2. Qoraal la gaadhsiiyo xafiiska UN ta EUda iyo Safaaradaha Ethiopia iyo Djibouti
3. Baaq digniineed oo qoraal ah loo diro madaxtooyadda, guurtidda, komishanka, iyo ciidamada
4. Dood cilmiyeed ku saabsan nabada qiimaheeda iyo qiimaha kursiga diyaariyo
5. Madax-dhaqameedka si adag loolla taliyo in ay dib u laabtaan xerooyinkoodii
Waxaan gunaanadkii ku talineynaa in bulshad ay heegan gasho, isu diyaariso in ay tartan xalaal ah galaan, in ay isha ku hayaan diyaarinta sanaadiiqda codbixinta, keenistan goobaha, daabulista, tirinta, saxaafadda, idaacadaha, dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo hawlgalka gudiyadda ama khubarada caalamiga, iyo shaqada kormeerka guud.
Qofkasta xil baa saran in la socodo hareerihiisa, hortiisa, hillaaca, soona tabiyo haddii uu dareemo wax is daba-marin goobaha ka socda, madax-is galin habeysan, iyo qas odoroosid lid ku ah amaanka guud.
Qasku xaguu jiraa ma hareetan, ma horteydan ma hillaaca!